The New Economy: Nye ya pụọ ​​| Martech Zone
Google Blogoscoped akụkọ banyere a Akụkọ Reuters na Google Book Search ọhụrụ, ebe ha na-enyocha akwụkwọ site na nwebisiinka ma tinye ha na ịntanetị, na-enyere aka n'ịbawanye akwụkwọ akwụkwọ.
Google Book Search enyerela anyị aka ịtụgharị ndị nyocha n'ime ndị ahịa, kwuru, sị Colleen Scollans, onye isi ahịa ahịa ịntanetị nke Oxford University Press
Amaghị m otú m ga-esi kwuo okwu ahụ, mana edere m banyere omume a ntakịrị. Inye ya ka i nweta ego… kedu nke ahụ si eme? Ọfọn, ọ na-eme. Ọ bụghị ụdị ọhụụ. A sị ka e kwuwe, redio nyere anyị abụ ndị mmadụ gara ma zụta mgbe e mechara. Lọ ọrụ egwu na-atụ egwu nbudata, mana ọ bụ ọgụ na-enweghị isi. Ọgbọ na mmemme ndị ọgbọ ga na-eme ka ọ dị mma ma nyekwa ụzọ nkesa faịlụ na-ahụghị. Bọchị ga-abịa, n'oge na-adịghị anya, na RIAA ga-ahapụrịrị na ịchụso iwu ma wuo usoro azụmaahịa ka mma. Ebe obu na m bu onye mbu Napster / Metallica juru, azutabeghm ihe ozuru ahia Metallica. Na tupu, M Metallica ihe niile… Amaghị m na ole ego Lars na ndi oru furu efu site shunning otu n'ime ha Fans, ma ọ meela nke ukwuu. Ee, uto m n'egwú agbanweela kemgbe afọ… ọ dị ntakịrị karịa ugbu a. 🙂
Sọftụwia adịghị iche. Yahoo! na nso nso a kwuru na ha ga-ekesa ngwa Email ha kpamkpam ka ndị ahịa nwee ike iru ngwa na ya. Uru ya? Ha na-agbasa ikike azụmaahịa na amamịghe gafee mgbidi ụlọ ọrụ ha na ụwa. Dika otutu mmadu na-ewu ngwa, ochicho nke iji Yahoo! dị ka ISP nhọrọ ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere. Abụ m otu onye ahịa ndị na-achọghị ịhapụ… ngwaọrụ dị ka Nje Virus nchedo, Spam nchedo, Nne na nna elekọta ngwaọrụ, Ẹkedori… ha niile na-eme ka m chọrọ ịnọ na Yahoo DSL. Ọrụ Pro dị mma, enwebeghị m ọpụpụ karịa nkeji.
Ugbu a akwụkwọ! Ndị nke ahụla ma gụọ blog m maara na abụ m akwụkwọ hound. Enweghị m nnukwu ụlọ akwụkwọ, mana ị ga-ahụ akwụkwọ ebe niile na ebe m. Enwere m mmasị na akwụkwọ mkpuchi siri ike (yabụ ekwere m na m na-azụta akwụkwọ maka mkpuchi ha). Ihe mara mma kachasị m mma bụ
Capote si na Ọrịa Nzuzo. Mgbe na-ekiri ihe ịrịba nkiri, e nyere m mmụọ nsọ ịgụ akwụkwọ ahụ.
Blọọgụ bụ ụdị ọzọ nke inye ya ego. Agụla m (ọtụtụ) blọọgụ ma nwee ọtụtụ ihe ọmụma banyere njikarịcha Nchọgharị Nchọpụta, Social Media, Mmemme, Nchịkwa, Onye Isi, wdg. Ọtụtụ blọọgụ emeela ka m zụta akwụkwọ. N'ụzọ na-emegide onwe m, azụrụ m akwụkwọ kacha ọhụrụ nke Seth nke anakọtara ma hazie site na nke ya blog… Na m zụrụ akwụkwọ ahụ mgbe m hụrụ ka a kpọsaara ya na blọọgụ ya. N'ihi ya Seth nọ na-enye m ya ugbua… na m zụtara ya, kwa! O nyere ya n'ihi ego!
My blog adịghị eweta na ihe n'ụzọ nke kpọmkwem revenue. Agbanyeghị, ọ ghọgoro m ụzọ dị mma iji ruo atụmanya na ndị ahịa ole na ole. Enweela m obi ụtọ ịme ụfọdụ gbasara mgbasa ozi gbasara mmekọrịta anyị, ndụmọdụ gbasara data gbasara data, mmepe Google Map, mmepe WordPress, na ịmekọrịta na Social Media ọhụrụ. azụmahịa (ka na mmepe). Imirikiti azụmahịa a enweghị ike inweta na-enweghị iru nke blọọgụ m.
Fọdụ ndị folks nwere ike iche na ịdebe ihe ọmụma gị n'ịntanetị na-etinye ya n'efu ma ị ga-ewepụ ego. Ihe m choputara bu na otutu mmadu anaghi acho 'izu ohi' ihe omuma; kama, ha na-achọ ndị maara ihe! Otu blọọgụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nye ndị ahịa gị ozi ha chọrọ iji hụ na ị tozuru oke ma ọ bụ jụọ ajụjụ.
Nke a bụ akụ na ụba ọhụrụ. Ọ bụrụ na inyeghị ya iji kpata ego, onye ọzọ ga - enye ya!
WordPress chepụtara: Tinye ihe Dezie profaịlụ njikọ ma ọ bụrụ na ite na
Ọkt 7, 2006 na 11:32 PM
Otu sochie na nke a… ozi nke AllofMP3 na-akụ ụgbụ… saịtị nbudata nke Russia na-akwadoghị nke na-enye nbudata MP3 na-enweghị njikwa ikike dijitalụ yana ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
"Nchịkwa nke AllOFMP3.com enweghị ozi gbasara iwu nke obodo ọ bụla, ọ bụghịkwa maka omume nke ndị ọrụ si mba ọzọ."
Ahụrụ m ịntanetị n'anya!